Guraandhalaa 16, 2017
Prezidaant Donald Traampii fi muummichi ministeeraa Israa’el Benjamin Natanyaahuu marii White Housetti geggeessaniin ergaa tokkummaa erga dabarsani booda koreen Senatii immoo kan Traamp filatan Israa’elitti ambaasaaddore US raggaasisuuf dhuga ba’umsa dhaggeeffatuuf jira.
Koreen hariiroo alaa Senetii kan qubsuma Israael ijaartu deggeranii fi embasiin US kan Isra’el Tel Aviv irraa gara Jerusalemitti akka darbu falman ogeessa seeraa David Friedmaniif gaaffii dhiyeessuuf jira.
Gareen ambaasaaddoroota duraanii kan bulchiinsa prezidaantii Republikaanotaa fi Demokraatotaa aangoo sana qabatanii turan Friedman ejjennoo leellistummaa qabu jechuu dhaan koree murtii haqaaf xalayaa erganii jiran.
Bulchiinsi Traamp immoo Friedman-n akka ambaasaaddoraatti gamasii qabaachuun hariiroo US fi Isra’eliif akka fakkeenyaatti fudhatama jedhee jira.
Tramp filmaata Faalixiin biyya of dandeessu akka taatu jedhu ilaalchisee yaada madaalawaa qabaachuu dubbatan. Gam lamaaniittu kan qaamoti lamaan itti walii galan nan deggera jedhan Trump.
Gurrandhalaa 14, Guyyaa Jaalalleeti,Valentines’ Day.Guyyaan Guyyaa Jaalalaa isanii haa tahuu jenne!
Obbolessi Hoogganaa Kooriyaa Kaabaa Har’a Maaleesiyaa Keessatti Ajjeefame Jedhan